US President Mr. Barak Obama Speech at Yangon University | အ မှတ် တ ရ ။
ဆိုင်ကလုန်းဒဏ်ကို ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေကို ကူညီဖို့အတွက် သာမန် ပြည်သူတွေက ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေ စုစည်းဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ သိခဲ့ရပါတယ်။ လွတ်လပ်မှုရဲ့ အသံကို မျော်လင့်နေတဲ့ ဟစ်ဟော့ပ်အနုပညာရှင်တွေရဲ့ စည်းချက်တွေ၊ ကျောင်းသားတွေရဲ့ အသံတွေကိုလည်း ကြားခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ မွေးရပ်နဲ့ မိသားစုတွေဆီကို ဘယ်တော့မှာ အဆက်အသွယ်မပြတ်ကြတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ၊ ပြည်ပသွားရောက်နေထိုင်သူတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ တွေ့ခဲ့ရပြီးပါပြီ။ အဲဒါတွေအပြင် ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်တဲ့ ဂုဏ်သရေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ စိတ်အားတက်ကြွခဲ့ရပါတယ်။ မျော်လင့်ချက်တွေ ခင်ဗျားရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ တောက်လောင်နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လူသားကိုမှ အကျဉ်းချထားလို့မရဘူးဆိုတာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ ” ကျွန်တော် သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်တုန်းက အကြောက်တရားနဲ့ အုပ်စိုးနေတဲ့ အစိုးရတွေဆီကို ”ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လက်သီးဆုပ်ကို ဖြည်ဖို့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က လက်ကမ်းပေးမှာပါ”လို့ ကျွန်တော်သတင်းစကားတစ်ခု ပါးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ခွဲလောက်အတွင်းမှာ အံ့အားသင့်ဖို့တဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းမှုတွေ စတင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
အများကြီး ရှေ့ဆက်သွားရဦးမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် တိုးတက်မှုလေးတွေဟာ ငြှိမ်းသတ်ခံရတာမျိုး ဖြစ်သွားလို့မရပါဘူး။ ဒီမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် တိုးတက်မှုကလေးတွေကနေ ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်သူတွေအတွက် တောက်ပတဲ့ ဥတ္တရကြယ်တစ်စင်း ဖြစ်လာရပါမယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ အတူတကွစုဝေးခွင့်ကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်နေမယ့်အစား အပြည့်အ၀လေးစားမှုပေးရပါမယ်။ ဖိနှိပ်ပိတ်ပင်နေမယ့်အစား မီဒီယာအပေါ်ဆင်ဆာ လွှမ်းမိုးထားတာကို ဆက်ပြီး ရုပ်သိမ်းပေးရပါမယ်။ ဒီခြေလှမ်းတွေကို ဆက်လျောက်လာနိုင်တာနဲ့အမျှ ခင်ဗျားတို့ တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။ မြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းကို နိုင်ငံသားတွေက ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတဲ့အသံကို လျစ်လျူမရှုဘဲ နားထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို တရားမ၀င်မလုပ်ဘဲ ပါဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းမှာ မဲဆန္ဒရှင်တစ်ယောက်က ”ကျွန်တော်တို့မိဘတွေ၊ ဘိုးဘွားတွေ ဒီအတွက် စောင့်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါမှ မြင်မသွားခဲ့ရပါဘူး”လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ကာကွယ်ဖို့ အာဏာရှိတဲ့သူတွေဟာ အကန့်အသတ်ရှိမှုတွေကို လက်ခံရပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမေရိကန်စနစ်က အဲဒီလိုဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားတာပါ။
« ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၏ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု့ များ ။ US President Mr.Obama Historic visit Myanmar ( Reuters ) »
Anonymous (06:09:54) :
ï»¿bailey ugg boots for sale The certain products give crucial cleansing to guarantee your ugg shoes or are generally free of cost in relation to just about any deposits. A one thinking about the key products and services this distinct device is generally that it might be swiftly mounted within just open places like locations to eat, department merchants, lodges, faculties, stadiums, offices, airlines and so on. The unique Programmed Boot Polish Products append tons of worth into the adjacent spots where by just these are positioned. In addition they profferanew exquisite in mix with advanced skills, when cleansing your ugg sneakers or boots. What'salot more , it renders thisalot easier for polishing top of the plane of your boot alongside one another with taking away regarding fantastic sand from your boot only. It is vehicle-magically done by usually means of adjusting the particular boot ahead and backward previously brought upanew descending belief dish. UGG Payton Boots,is aware the way substantial and also necessary ugg shoes or boots have been in our existence. If you are opting for enterprise workplace or searching, or numerous other places youll would like to to get started with complement your attire gettingareally excellent established of two . At the minute everyaperson adult males and also younger females are involved in relation to the ugg bailey button triplet low-priced look. New age adult males unquestionably recognise todays vogue actions. He has realized what just boots would likely go with the attire and also guidance him to produce the unique sort file and also persona. Mens ugg footwear or boots shoes or boots is accessible in exclusive style, type and model and also coloring out there on the promote. Appropriate set of two boots is critical for each and every solitary specific event. There are huge collection in relation to mens ugg sneakers or boots during marketplaces and also you could positively get the suitable established of two boots. You edge linked with Air Best extent Footwear can bealeather-based-based mostly. bailey ugg boots chestnut Quiteafew consumers exchangeable the notion related with Men Nike Air Best extent Wildwood Supr associated [url=http://www.uggsbootscheapsale.co.uk]UGG Boots sale[/url] with fur. On the entire cow leather-based is definitely without any question definitely not the first Air Greatest extent Footwear. Using there wasa[url=http://www.uggsbootscheapersale.co.uk]UGG Boots uk[/url] distinctive acquire associated with Air Greatest extent Footwear open up approximately the localized, We hanging by Guys Nike Air Finest extent Wildwood Supr, Air Greatest extent Footwear,bailey button boots Air Finest extent popular argyle knit, for your new open up, Air Finest extent Footwear dealer manageasubstantial minimal expense Air Greatest extent Footwear, Air Finest extent decreased expenses foradecreased cost, We will need Air Best extent Footwear home operator in order to produceaAir Biggest extent Footwear triplet to me. Nike Air Biggest extent Footwear USAs [url=http://www.uggsbootscheaper.co.uk]cheap ugg boots[/url] name is undoubtedly as effectively great, in Some accord will action in the affidavit lining that enables the ugg best sellers 2010 to mould greater to your bottom look and so accretion the ranges of abundance you experience if chopping them.UGG Classic Metallic,as perfectly as its items and choices meant for females and gentlemen, bailey button boots possesses made an array of childrens shoes that have the manufacturers great superior as well as style as nicely as regions all of them inascaled-down arrangement.